Dowlada Soomaaliya iyo Midowga Afrika oo isku khilaafay waxqabadka ciidamada AMISOM | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dowlada Soomaaliya iyo Midowga Afrika oo isku khilaafay waxqabadka ciidamada AMISOM
Dowlada Soomaaliya iyo Midowga Afrika oo isku khilaafay waxqabadka ciidamada AMISOM
Dowlada Federalka ayaa ka soo horjeesatay in war ka soo baxay Midowga Afrika oo ah in ciidamada AMISOM ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada dowlada Soomaaliya inta uu socdo khilaafka arrimaha doorashooyinka.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim ayaa sumcad dil ku tilmaamay go’aankaas maadaama waajibaadka AMISOM aysan qayb ka ahayn , waxaana uu intaas ku daray in aysan aqbali doonin dalabkaas oo ay soo jeedintiisu leeyihiin dowlado aan dooneyn in ciidamada Soomaaliya ay dhismaan.
“AU-da waxa ay soo saartay in Ciidamada AMISOM ay la socdaan dhaqdhaqaaqa Ciidanka Soomaalida, Ciidamadii aan rabnay in ay ka madax-bannaanaadaan miyaa la hoos geynayaa, AMISOM shaqadoodu waa in ay ilaaliyaan xarumaha dowladda, madaxda iyo la dagaalanka argagixisada” ayuu yiri Wasiir ku xigeenka Gaashaandhigga Soomaaliya oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday Muqdisho.
Wasiir ku xigeenka Gaashaandhiga warkan ka soo baxay ayaa u muuqda mid bilow u ah khilaaf horleh oo dowlada federalka iyo Midowga Afrika waxaana lagu wadaa in dowlada federalka ay war rasmi ah ka soo saarto go’aanka Midowga Afrika.
Dowlada Soomaaliya iyo Midowga Afrika oo isku khilaafay waxqabadka ciidamada AMISOM was last modified: April 24th, 2021 by Admin
Golaha amaanka oo war ka soo saaray xaaladda dalka Soomaaliya
Maxkamada Ciidamada oo bilowday dhagaysiga dacwada dilkii Guddoomiyihii hore ee degmada Hodan
DHAGEYSO:DHALINYARO DHAMEYSATEY TABABARO XIRFADO KALA DUWAN OO LOO SOO XIREY .
Dhageyso:-Warka Duhur Idaacada Warsan
Tallaalka Covid19 oo rasmi ah uga bilaabanaya dalka Ingiriiska
Madaxweyne Qoor Qoor oo u kuurgalay sida ay u shaqeyso Wasaarada Maaliyadda Galmudug (Sawirro)